GPS Navigation waa SOCDO off - UPDATED
Su'aal GPS Navigation waa SOCDO off - UPDATED
sano 2 2 todobaad ka hor - 1 sano 10 bilood ka hor #521 by Gh0stRider203
Waxaan ogaaday waxa waxan u samaynaysaan waxoogaa ka badan inta badan halkan, waayadan dambe. Marna ha u sameeyey 2017 hor ......
Waxaad ka arki kartaa track ee aan u malaynay in la qaato, ka dibna kaliya woqooyi waxaa ka mid ah, My track galay DFW, ka dibna My track HADDA in LFRG, xagga woqooyi ka xigta IN.
Waxaan ahay at khasaaro ah sababta ay u sameeya. Mararka qaarkood waxaa u soo duuli doonaa wadada saxda ah iyo dib u jeer dhowr dhammaataan, ka dibna waxaa jira waqtiyo ay tahay sida NOPE! MA waxa ay qabanayaan .....
My degtey at DFW dhowayd kaamil ah. xaq on dhibic ah, iyo heerka jeeda of -.37 ft / sec at touchdown ah (ka hor tagaan .... noqon masayr lol)
Qof kasta oo helay wax?
Last edit: 1 sanad 10 bilood ka hor by Gh0stRider203.
sano 2 2 todobaad ka hor #524 by Dariussssss
Waa hagaag, waxaad isku dhexyaacsan wax.
Ma upkiisa wax ku saabsan wadada, ka dib markii uu iska saaro? Waxaan f aad ku samaysay, FSX isku ciyaartid qorshaha duulimaadka oo dhan doonaa, oo marar badan soo celin diyaaradda si ay ugu horeysay ee hab-dhibic. Or, baddal hab HDG halkii GPS / FMC. Waana sababta aan u hubiyo iyo double hubi wadada si aad u xaqiijiso ma jirto qalad ama qaar ka mid ah markooda waalan ama wax la mid ah.
sano 2 2 todobaad ka hor #526 by Gh0stRider203
lol nope. Ma bedeli wax aan haysto in ay ka VFR u baddashaan IFR ay sabab u tahay isagoo IFR Ahaado iyo barta in, mar hore ayaan u ahay in xiriir la munaaraddii.
Anigu ma fadhiisan oo dheygaga FSX inta lagu guda jiro kuwaas oo duulimaad dheer. Waxaan ku samayn walax kale, sida World play of Maraakiib dagaal (taas oo aan hadda sameynayo lol)
sano 2 2 todobaad ka hor #527 by Dariussssss
... Waxaan u lahaa dhowr ah '' in ka badan balli '' duulimaad, dhab ahaantii mid aad u dheer KPHX-LYBE iyo diyaaradda ahaa kaalinta on, xaq halkaas oo ay noqon waa. Waxaan ma u awoodin inuu sameeyo duulimaadka oo dhan hal mar, si aan u sameeyey in a qeybo yar. Badbaadi barta qaar ka mid ah iyo sii waday markii aan in muddo ah ku qabtaan. Like waxaan is-idhi, waxa uu ahaa garto on.
waxaa suuragal ah in aad ii soo diri qorshe duulimaad in? (FB ama e-mail) waxaan isku dayi doonaa si ay u sameeyaan. Waa kuwee diyaarad aad isticmaalayso on this mid ka mid ah?
sano 2 2 todobaad ka hor #528 by Gh0stRider203
Sida caadiga ah tani ma aha arrin ......
Waxaan ku samayn KDFW - LFRG ee-747 400LCF ay sabab u tahay xaqiiqda ah in ay u dhow kala duwan max, hab cadaalad ah u fudud (marka aad 12 runway lol), oo ay sabab u tahay, lacagta ugu badan waxaan ka dhigi waayo, VA la duulimaadkan .
Waxaan ku lifaaqan file zip qorshaha 3 aan isticmaalin.
KDFW - LFRG VFR in runway 12 & 30, iyo IFR in 30 runway
Magaca faylka: KDFW-LFRG.zip
sano 2 2 todobaad ka hor #529 by Dariussssss
OK. Waxaan ku samayn doonaa wax yar oo kala duwan, la 747ERF caadi ah.
Waa arrin la yaab leh ii si ay u sameeyaan diyaarad on VFR sida ... waxaa laga yaabaa in ay meesha qaladka waa ... Anyway, anigu waxaan iyada u isku dayi doonaa baxay.
sano 2 2 todobaad ka hor #531 by Gh0stRider203
99.999% ka mid ah duulimaadyada waa VFR iyo KDFW - LFRG waa wadada kaliya oo aan leeyahay dhibaatadan iyadoo. Ma jecli IFR. Waxaan ula jeedaa waxa barta sameeyey IFR ee cimilada VFR, marka aad kaliya qeybiso suubiyaan burin ka dib markii qaadataan-off?
sano 2 2 todobaad ka hor #532 by Dariussssss
99.999% ka mid ah duulimaadyada waa IFR, la ATC, inkastoo ay tahay wax aad looga xumaado sida She'ool, laakiin waxaan isku dayaa inaan dhawro sidii macquul ah intii suurtogal ah.
Ilaa hadda si wanaagsan, diyaaradda waa xaq on track.
sano 2 2 todobaad ka hor #533 by Gh0stRider203
Waxaan samayn lahaa in .... laakiin waxaan jeclahay in aan seexdo Waxaan ha doonaa ilaa aad ku dari saacadaha
Maxay tahay sababta aan u soo duuli aad u badan? sidoo kale, waayo, mid .... Tani waa waxa aan ilaa hadda la gaarey bishii April.
Marka labaad, waxaan ahay mid ka mid ah oo kaliya duulaya hadda, waayo, VA ah, oo hadda kharashka waa $ 961,250 in lacagaha la kiraysto bil ah shimbiraha pax 2 (labadaba waa a 777-200LR), iyo $ 1,258,334 bil ah freighters 2 (747 -800F).
Waa kor ii si loo hubiyo in aan keeno in ku filan bil kasta si ay u daboosho in ka dhigi $ loo baahan yahay si ay u bixiso.
sano 2 2 todobaad ka hor - sano 2 2 todobaad ka hor #534 by Gh0stRider203
Aan ku sameeyey in ka badan nm 300K bishii la soo dhaafay, oo Ilaah wuxuu og yahay saacadood inta lol
Waxaa laga yaabaa in aan ilaa fal qeybiso kuu. Waxa aanu mar walba samayn ii. Waa gebi random
Xogta ugu dambeysay: 2 sano 2 usbuucyadii hore by Gh0stRider203.